Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Doğu Ekspresi ile Erzurum’dan Kars’a seyahat etti. Uçakla İstanbul’dan Erzurum’a gelen Ersoy, Erzurum Havalimanında Vali Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi [ပို ... ]
Bisikletin ulaşım aracı olarak kullanımı yaygınlaştırmak, bisiklet yolları ve rotalarını tasarlamak, bisiklet turizmini yaygınlaştırmak amacıyla Bisiklet ve Kent Çalıştayı gerçekleştirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, İl Kültür ve [ပို ... ]
တူရကီလေတပ်အခြေစိုက်တည်ရှိပြီးအဆိုပါယာယီတူရကီသိပ္ပံမြင်းခွာကျွန်းသို့ရောက်ရှိရာအသင်း၏ဆက်စပ်ထဲကအန္တာတိတ်သိပ္ပံတောင်တက်4အစုံကဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါတယ်။ စူးစမ်းရှာဖွေရေးခေါင်းဆောင် ဒေါက်တာ ခက်ခဲသောအခြေအနေများအောက်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သောခရီးပြီးနောက် Ersan Başar [ပို ... ]
Bursa Sea Buses Operation (BUDO) ကို Bursa Metropolitan Municipality မှတည်ထောင်ခဲ့ပြီး Bursa နှင့် Istanbul အကြားပင်လယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြစ်သည်။ Sea Bus ဝန်ဆောင်မှုများကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ Ist Istanbul-Bursa လေယာဉ်ခရီးစဉ်များသို့ခရီးသည် [ပို ... ]
ယနေ့သမိုင်းကြောင်းတွင်ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃ ရက်၊ ၁၉၄၂ ခုနှစ်၊ ပြည်နယ်ရထားလမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုမှအက်ကင်ဒန်ဆိပ်ကမ်းကိုသိမ်းယူခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအမိန့်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။